Iapile, mfutshane ukufikelela kwixabiso le-trillion yeedola | IPhone iindaba
Izabelo zeApple ngoku zithengiswa ngexabiso eli- $ 175 nganye, inika umenzi we-iPhone ixabiso lemarike eyi- $ 900 yezigidigidi. Amaxabiso abeka iApple ngaphakathi kwe- $ 100 yezigidigidi yokuba inkampani yezigidi zeedola kuphela.
Izabelo ze-Apple ziya kunyuka ziye kwi-195 yeedola ukuze inkampani ifikelele kwi-trillion yexabiso-kuxhomekeke kwinqanaba lokuthengwa kwesabelo-kwaye inani elikhulayo labahlalutyi beWall Street bakholelwa ukuba oko kuyakwenzeka.
UDrexel Hamilton, umhlalutyi wezezimali ku-Brian White oxhasa kakhulu i-Apple, unexabiso leenyanga ezili-12 elijolise kuma-235 eedola kwisitokhwe senkampani. Ngamanye amagama, iyaxela kwangaphambili I-Apple inokuba yinkampani ye-1.2 trillion Iidola ngonyaka nje omnye.
Ngorhwebo lwentengiso olungaphezulu kwe-900 yezigidigidi, sikholelwa ukuba u-Apple usendleleni yokuba "sisigidi sezigidi zeedola," njengoko kubonisiwe kwithagethi yethu. Sibe ngabokuqala eWall Street ukuqikelela ukuba iApple izakubetha itrike yentengiso eyi-1 trillion; ixabiso lethu ngoku $ 235 ilingana nentengo yentengiso eyi-1,2 trillion. Umhlalutyi weRBC Capital Markets uAmit Daryanani ukwathe iApple inakho ukubetha i-2018 yezigidi zezigidi zeedola kwaye ingade idlule kolo xabiso ukuphela kuka-190. Ixabiso layo ekujoliswe kulo ngoku kwizabelo ze-Apple li-XNUMX. Iidola. I-Apple inokuba yinkampani yezigidi zeedola kuphela kwihlabathi, kodwa ayizukuba yeyokuqala. I-Dutch East India Inkampani ye-spice ishishini, eyasekwa ngo-1602, yayiyeyokuqala ukuya esidlangalaleni kwaye ngaxa lithile yayixabisa ngaphezulu kwe-7 trillion xa kulungiswa ukunyuka kwamaxabiso.
Abahlalutyi baseWall Street, kubandakanya noMhlophe, bebesele beqikelela ukuba iApple izakuba yinkampani yezigidigidi zeedola ukusukela nge2012.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-Apple, ifutshane ekufikeleleni kwixabiso le-trillion yeedola
Ifernandez yaseJamani sitsho
Inkampani eyi-900 yezigidi zeedola iyafana nokuthetha i-900 yezigidigidi. Ke iApple izakuba yinkampani yezigidigidi zeedola.
Phendula Jamani Fernandez
Kuxhomekeke. EMelika bathatha i-trillion ukuya kwi-10 ^ 9, ngelixa i-trillion eYurophu, ngokwe-International System of Units, ihambelana ne-10 ^ 12. Ngamanye amagama, itriliyoni enye eMelika iyafana nesigidi esinye eYurophu.
IOS 11.2 beta, zezi bugs ezishiyayo kunye nezo sele zifikile.